तीन वटै वडामा नेकपाका उमेद्वार सानदार विजयी जनताको सेवामा समर्पित हुने विजयी उमेद्वारको प्रतिवद्धता - हाम्रो एकता
तीन वटै वडामा नेकपाका उमेद्वार सानदार विजयी जनताको सेवामा समर्पित हुने विजयी उमेद्वारको प्रतिवद्धता
प्युठानको दुई स्थानिय तहका तीन वडामा वडाअध्यक्षको लागि भएको उपनिवार्चनमा नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी (नेकपा) का उमेद्वार विजयी भएका छन् । प्युठान नगरपालिका वडा नम्वर २ को वडा अध्यक्षमा नेकपाका उमेद्वार मुक्ती पोख्रेल विजयी भएका छन् । नेकपा र नेपाली कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा रहेको यस वडामा कांग्रेसका उमेद्वार मोहन सिंह बिष्टलाई दुई सय ८४ मतको अन्तरमा हराउदैँ नेकपाका पोख्रेल विजयी भएका हुन् । पोख्रेलले एक हजार एक सय २७ मत प्राप्त गरेका छने भने प्रतिद्वन्दी बिष्टले आठ सय ४३ मत प्राप्त गरेका छन् । यस वडामा २५ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत एंव जिल्ला बिष्णु प्रसाद गौतमले जानकारी दिए । दुई जनाको उमेद्वारी परेको यस वडामा तीन हजार २१ मतदाता रहेका थिए । जसमा एक हजार नौ सय ९५ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए । वडा अध्यक्ष खिम बहादुर बिष्टको निधन भएपछि यस वडामा उपनिर्वाचन भएको थियो ।
वडामा रहेको खानेपानी समस्या पहिलो प्राथमिकता
प्युठान नगरपालिका २ मा विजेता मुक्ति पोख्रेल !
लामो समयसम्म शिक्षण पेशामा आवद्ध भई अवकाश पाएका ५४ वर्षिय पोख्रेल नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी (नेकपा) जिल्ला सचिवालय सदस्य हुन् । उनी पछिल्लो समय राजनीति संगै कुखुरापालन व्यवसायमा आवद्ध छन् । उनी विभिन्न संघसंस्थामा समेत आवद्ध भएको बताए । निधन भएका अध्यक्षले अगाडी वढाएका योजनाहरुलाई पुरा गर्ने उनले बताए । यस वडाको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको खानेपानी समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समाधान गरिने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
ऐरावती १ मा पाण्डे र २ मा मगर विजयी
ऐरावती १ मा नेकपाबाट विजयी उमेद्वार द्रोणप्रसाद पाण्डे !!
ऐरावती गाउँपालिका वडा नं १ र २ को कडाअध्यक्षका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी(नेकपा) का उमेद्वार विजय भएका छन् । ऐरावती १ दाङवाङमा नेकपाका द्रोणप्रसाद पाण्डे विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका अमर रेस्मी मगरलाई नौ मतको झिनो मतान्त्ररले पछि पार्दै उनी विजयी भएका हुन् । पाण्डेले छ सय ९६ मत प्राप्त गरेका छन् । भने रेस्मीले छ सय ८७ मत प्राप्त गरेका छन् । यस वडामा एक हजार तीन सय ९७ मत खसेको थियो । जसमा १४ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत चन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिए । ऐरावती १ मा विजयी ४१ वर्षिय पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी( नेकपा) का जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । जनता प्रावि जुडाटाकुरामा २२ वर्षसम्म अस्थायी शिक्षक भएका पाण्डे सामाजिक छवि राम्रो छ । उनले े २०७५ चैत्र ३ गते शिक्षण पेशाबाट अवकाश भएर राजनीतिमा होमीएका हुने । उनले यस क्षेत्रको सड्क, खानेपानी, स्वास्थ्य , शिक्षा लगाएत जनताका आवश्यकताहरु पुरा गर्न आफु प्रतिवद्ध हुने बताएका छन् । साथै वडा भित्र सिंचाई कुलो, पक्की पुल निर्माणमा समेत अग्रसर हुने उनले बताए ।
त्यस्तै ऐरावती गाउँपालिका– २ बरौलाको वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भिमेश कुमार घर्ति मगर विजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय जनमोर्चाका भक्त बहादुर बिकलाई तीन सय ५१ मतले पछि पार्दै घर्तिमगर विजयी भएका हुन् । मगरले आठ सय ५५ मत प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार भक्त बहादुर बिकले पाँच सय चार मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै नेपालि कांग्रेसका भुपाल जिसीले तीन सय ५६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
ऐरावतीमा स्वतन्त्रबाट विजयी उमेद्वार भिमेसकुमार घर्तिमगर !
यस वडामा वडाअध्यक्षका लागि एक हजार सात सय ४१ मत खसेको थियो । जसमध्ये २६ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत भारतीले बताए । भिमेश घर्ती मगर नेपाल कम्युनिष्ट्र पार्टी( नेकपा) ऐरावती गाउँ कमिटीका सचिवालय सदस्य हुन् । केन्द्रमा राजमो र नेकपाको तालमेल भएपछि उनले ऐरावती २ मा सूर्य चिन्ह पाएका थिएनन् । गाउँ संगठन कमिटि र जिल्ला कमिटीको सल्लाहमा उनले स्वतन्त्र उमेद्वारी दिई चुनाव जितेका हुन् । उनलाई नेकपाका मतदातले मतदान गरि विजयी बनाए । ४२ वर्षिय मगर ८ वर्षसम्म शिक्षण पेशा गरेपछि राजनीतिमा हेमीएका हुन् । उनी आदिवासी जनजाती महासंघ जिल्ला शाखा प्युठानका कार्यवाहक अध्यक्ष ,नेपाल मगरसंघ प्युठान शाखाका सचिव, ५ नंम्बर प्रदेशका सदस्य, बरौला कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, जनकल्याण आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका छन् ।
उनले आफु वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भईसकेपछि वडामा भएका खानेपानी, सड्क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएत क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्न अग्रसर हुने बताए । वडामा प्राप्त योजनाहरु सम्पुर्ण क्षेत्रमा पुर्याउने, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, युवा, दलित जनजातीका क्षेत्रमा आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्ने बताए । ऐरावती गाउँपालिका २ का वडाअध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र वडा नं १ का वडा अध्यक्ष पदम थापा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख भएपछि यी वडामा उपनिर्वाचन भएको हो ।
यसैगरि देशका ५२ स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाले अत्यधिक स्थानमा व्रचस्व जमाउन सफल भएको छ ।